Hola Free VPN Proxy Unblocker ARM7A_1.142.103 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း ARM7A_1.142.103 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Hola Free VPN Proxy Unblocker
Hola Free VPN Proxy Unblocker ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
•ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ applications များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကြည့်ရှုရန်လွတ်မြောက်ရေး
တစ်ဦးသည် သာ. ကောင်း၏အင်တာနက်ကိုမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်!
• hola တစ်ဦးထက်ပိုပွင့်လင်းသော web ဖန်တီးရန်၎င်း၏အသုံးပြုသူပျင်းရိအရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်ဟာအခမဲ့ peer-to-peer VPN service တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
• hola စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရန် VPN service တစ်ခုတစ် paid-အဘို့, စီးပွားဖြစ်ဗားရှင်းပေးခွငျးအားဖွငျ့အခမဲ့င်း၏ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
• Unblock က်ဘ်ဆိုက်များကွန်ယက်ကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ဆန်းသစ်သက်တူရွယ်တူအားဖြင့်သင်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ပိတ်ဆို့
အခမဲ့ခံစားရနှင့် help_android@hola.org သူတို့ကိုပို့ပေးပါ
hola အခမဲ့ VPN ကို Lightning Browser ကိုပါဝင်ပါသည်နှင့် Lightning Browser ကို Mozilla က Public License, ဗားရှင်း 2.0 အောက်မှာအသုံးပြုသည်။ ဒီလိုင်စင်မိတ္တူမှာရရှိနိုင်ပါသည်: https://github.com/anthonycr/Lightning-Browser
* hola အခမဲ့ VPN ကို Proxy သင်၏အသုံးပြုမှုကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးပြုလဲလှယ်အတွက်တာဝန်ခံ၏အခမဲ့
သင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့အရင်းအမြစ်များကို (Wi-Fi နှင့်အလွန်ကန့်သတ်ဆယ်လူလာဒေတာ) ၏အချို့သော, သာ
သင်သည်သင်၏ device ကိုအသုံးမပြုကြသောအခါ။ သင်တစ်ဦးပရီမီယံအသုံးပြုသူဖြစ်လာဖွငျ့ဤကို turn off လိမ့်မည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ဘို့ငါတို့ TOS ဖတ်ရှုပါ။ http://hola.org/legal/sla/#automatic_route
နည်းပညာဆိုင်ရာဗိသုကာ: HolaVPN Proxy Unblock သူတို့ကိုနှေးခြင်းမရှိဘဲက်ဘ်ဆိုက်များကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ built တစ်ဦးအုပ်စုခွဲ-tunneling proxy ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမှတဆင့်သာအနည်းငယ်မျှသာလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်, နှင့်ကျန်ကြွင်းသောအလျင်မြန်ဆုံးမပိတ်ရန်အဘို့, တိုက်ရိုက်လှေတျတျောမူသည်။ အပြည့်အဝ privacy ကို VPN ကိုပျော်မွေ့ရန်, HolaVPN Plus အားကိုအသုံးပြုပါ။
Hola Free VPN Proxy Unblocker အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Hola Free VPN Proxy Unblocker အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Hola Free VPN Proxy Unblocker အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
mehboobrehman စတိုး311.91k
Hola Free VPN Proxy Unblocker ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Hola Free VPN Proxy Unblocker အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း ARM7A_1.142.103
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://hola.org/legal/privacy
Release date: 2019-07-05 22:13:20
လက်မှတ် SHA1: 1B:05:D6:5A:59:9C:05:C0:C8:8C:82:CA:28:96:D5:BE:1D:53:D5:68
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Derry Shribman
အဖွဲ့အစည်း (O): Hola
နယ်မြေ (L): Netanya
Hola Free VPN Proxy Unblocker APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ